Kooxda Paris Saint-Germain gacmaha ka laabanaysa David de Gea iyo Goolhayaha ay soo qaadanayso oo daaha laga rogay – Gool FM
Kooxda Paris Saint-Germain gacmaha ka laabanaysa David de Gea iyo Goolhayaha ay soo qaadanayso oo daaha laga rogay
(Paris) 19 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa la soo warinayaa inay gacmaha ka laabanayso soo xero gelinta goolhaye David de Gea, warkaasoo farxad u ah Man United, iyadoo durba la sii shaaciyey goolhayaha ay la soo saxiixanayso kooxda reer France.
Paris Saint-Germain ayaa u dhaqaaqi doonta soo xero gelinta goolhayaha kooxda AC Milan ee Gianluigi Donnarumma, waxaana ay doonaysaa inay keento garoonka Parc des Princes.
Wargeyska The Sun waxa uu leeyahay kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska gacmaha ayay ka laabanaysaa soo xero gelinta goolhayaha Man United ee David de Gea, taas bedelkeedana waxa ay soo qaadanaysaa shabaq-ilaaliyaha kooxda AC Milan ee Donnarumma.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Ligue 1 ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxaa dib ugu soo laabtay agaasimaheedii hore ee isboortiga Leonardo, waxaana uu door-bidayaa inuu 60 milyan oo gini oo u dhiganta 75 milyan oo dollar ku soo qaato 20-sano jirkaan, halkii uu isku shideyn lahaa De Gea.
Goolhayaha Manchester United ee De Gea ayaa la la xiriirinayaa inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Old Trafford kaddib markii kooxdiisu ku guuldarreysatay inay xilli ciyaareedka soo socda u soo baxdo UEFA Champions League, laakiin hadda waxaa soo baxaya in kooxda PSG aysan doonaynin saxiixa 28-sano jirkaan oo ay u weecatay goolhaye Gianluigi Donnarumma.
RASMI: Juan Mata oo heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Manchester United... (Imise sano ayuu saxiixay?)
Kooxda Arsenal oo doonaysa inay 11 milyan oo dollar ku soo qaadato da’yar diiradda u saaran Dortmund iyo Juventus